Tag: magento »Page 6 of 8» Martech Zone
Chishanu, April 25, 2014 Svondo, Zvita 24, 2017 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Stitch Labs inopa yakabatana odha uye yekuverenga manejimendi kune e-commerce chiteshi. Dzivisa manyore kupinda muhuwandu hwehuwandu mune maspredishiti, kutsvaga mavovoice, kana kutarisa kumusoro kwekubata info. Stitch inokutendera kuti utengese mune dzakawanda nzira dzekutengesa uye yekudzivirira hesera kubva kune imwe nzvimbo Stitch Maitiro Akawanda Ekutengesa Magero - Chengetedza zvese kubva kuodha kusvika kubhadhara kusvika pakutakura mune imwe chete sisitimu. Inventory Management - chengetedza manhamba akajeka uye kuve nechokwadi kuti maodha ari kugadziriswa nenzira kwayo. Raira Kutevera - shandura
China, November 14, 2013 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Visual Webhusaiti Optimizer chishandiso chekuyedza che A / B chinobvumidza nyanzvi dzekutengesa kuti dzigadzire akasiyana mawebhusaiti avo uye mapeji ekumhara vachishandisa poindi-uye-tinya mupepeti wobva waona iyo vhezheni inogadzira yakanyanya kutendeuka chiyero kana kutengesa. Visual Webhusaiti Optimizer zvakare inochinjika multivariate yekuyedza software (yakazara mafekitori nzira) uye ine huwandu hwezvimwe zvekushandisa senge hunhu hunongedzo, kupisa mepu, kushandisika kuyedzwa, nezvimwe A / B kuyedza - Kutaridzika gadzira akasiyana mavhezheni ewebhusaiti yako ne
dotMailer EasyEditor: Dhonza uye Donhedza Email Kugadziridza
Muvhuro, Mbudzi 4, 2013 Muvhuro, Mbudzi 4, 2013 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Zvishoma zvinhu zvinogona kunetsa kupfuura kuronga kunze email HTML template kana kushanda neyechitatu-bato template muvaki. Fungidzira uchikwanisa kumisikidza, kugadzira, kugadzirisa patsva, uye kugadzirisa ako matemplate eemail… pasina HTML kukodha kana hunyanzvi hwekugadzira webhu. Izvi ndizvo chaizvo zvakagadzirwa ne dotMailer neyavo EasyEditor. Zvimiro zve dotMailer's EasyEditor: Kurumidza kuendesa mifananidzo yako uye gadzira raibhurari - Gara wakarongeka nemifananidzo yese yemushandirapamwe munzvimbo imwechete. Kwayedza mushandirapamwe mameseji
Iyo Shanduko yeMagento
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Kusarudza ecommerce chikuva kunoenderana pane yakawanda misiyano. Huwandu hwezvigadzirwa zvauri kutengesa, iyo inogadziriswa yezvigadzirwa zviripo, izvo zvinodiwa mukubatanidza, uye zviwanikwa zvekusimudzira nekuvandudza chikuva zvese zvinoita basa. Magento yakaputika seye bhizinesi ecommerce chikuva chesarudzo nekuda kwekuchinjika kwekugadzirisa uye vateereri vazhinji vevashandisi vachigadzirisa mhinduro nekuitsigira. Tine shamwari yeMagento Platinum yatinoshanda
Dhizaina iyo Robust Mobile App ye iPhone uye Android mune mashanu Matanho
China, April 25, 2013 Chipiri, January 12, 2021 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi My Mobile Fans inopa anodhura masoftware maapplication uye nharembozha mawebhusaiti emunhu, asiri-purofiti uye diki bhizinesi nharaunda kuburikidza neindasitiri yavo inotungamira Do-It-Yourself (DIY) app anovaka. Iine zvinopfuura makumi mana zvakapfuma maficha ekutsikisa nhare, nzvimbo uye zvemagariro midhiya, anogona kunge ari iwo anodhura uye akasimba enhare yekuvaka app chikuva pamusika. Iko kunyorera kuri nyore, kuchipa nhanho-nhanho wizard yekukweva iwe kuburikidza nekumisikidza yako mobile application. Nhanho 40: Sarudza yako
Prev 1 ... 5 6 7 8 Next →
Page 6 pamusoro 8